Soo bandhigida hordhaca ah: Blackview BV8800 kaliya 225 euro | Warka gadget
Soo bandhigista: Blackview BV8800 kaliya 225 euro
Qolka Ignatius | 10/01/2022 14:00 | Mobiles
Blackview waxay soo bandhigtay sharadkeeda cusub ee 2021 dhamaadka 2022. Waxaan ka hadleynaa Blackview BV8800, terminal soo gaarey suuqa qaar ka mid ah in ka badan waxqabadka soo jiidashada iyo qiimaha lacagta. Si aan ugu dabaaldegno bilaabashadiisa, waxaan ku heli karnaa qalabkan si uun 225 euro iyada oo loo marayo AliExpress.
Haddii aad raadinayso mobile leh a processor awood leh, xusuusta ku filan iyo kaydinta Taasina waxay sidoo kale ina siinaysaa kamarado xiisa leh iyo batari fantastik ah, waa inaad eegtaa wax kasta oo qalabkani noo soo bandhigo iyo inaan hoos ku faahfaahinno.
Blackview BV8800 ee dhawaan la soo bandhigay waxaa ku jira tiro badan oo ah horumarada marka loo eego noocyadii hore ee soo saarahan oo waxay leedahay wax kasta oo u socda si ay u noqdaan telefoonka aad raadinayso, iyadoon loo eegin sida aad u isticmaasho.
Haddii aad ku raaxaysato bannaanbaxyada, waa inaad ogaataa in Blackview BV8800 ay ku jirto shahaado MIL-STD-810H, 4 kamaradood, oo ay ku jiraan kamarad wax arka habeenkii iyo baytari ka badan 8.000 mAh, kuwaas oo aanad ka werwerin inaad si joogto ah ugu dallaci doonto.
1 Blackview 8800 Tilmaamaha
2 Kamarado baahi kasta
3 Awoodda raaxada ugu badan
4 Battery dhowr maalmood
5 Naxdin iyo hoos u dhac u adkaysta
6 90 Hz bandhig
7 La jaanqaadi kara Google Play
8 Astaamaha amniga
9 Ku raaxayso dalabka
Blackview 8800 Tilmaamaha
Nidaamka hawlgalka Doke OS 3.0 oo ku saleysan Android 11
Screen 6.58 inji - IPS - 90 Hz refresh - 85% saamiga shaashadda
Xalinta shaashadda 2408 × 1080 HD Full +
Gacaliye MediaTek Helio G96
Kaydinta 128 GB
Batariga 8380 mAh - Waxay taageertaa dallacaadda degdegga ah ee 33W
Kaamirooyinka gadaal 50 MP + 20 MP + 8 MP + 2 MP
Kaameerada hore 16 MP
Taleefanka gacanta ee Bluetooth 5.2
Maareynta GPS - GLONASS - Beidou - Galileo
Shabakadaha GSM 850/900/1800/1900
WCDMA B1 / 2/4/5/6/8/9 oo leh RXD
CDMA BC0 / BC1 / BC10 oo leh RXD
Shahaadooyinka IP68 / IP69K / MIL-STD-810H
Midabada Cagaar Navy / Mecha Orange / Qabsashada Madow
Cabbirada 176.2 × 83.5 × 17.7mm
Peso Gram 365
kuwa kale Dual Nano SIM - NFC - Dareemaha sawirka faraha - Aqoonsiga wajiga - SOS - OTG - Google Play
Kamarado baahi kasta
Si ka duwan shirkado badan oo heer sare ah, kuwaas oo ku xayiran 12 MP, Blackview waxay na siinaysaa 50 MP dareeraha ugu muhiimsan, qaraar noo ogolaanaya in aan ballaariyo dhammaan qabashadayada oo aan ku raaxaysanno dhammaan walxaha lagu muujiyey.
Sidoo kale, marka la daabacayo, ma lihin xad isku mid ah in aan helno kaliya 12 MP. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale leedahay 20 MP sensor, dareeme aragga habeenkii kaas oo noo ogolaanaya inaan sawiro iyo muuqaalo ka qaadno xaalad kasta oo iftiin ah.
Iyadoo ay la socdaan labada dareemayaal, waxaan sidoo kale helnaa a dareemaha xagal aadka u ballaaran, Dareemayaal na siiya xagal 117-degree ah oo muuqaal ah iyo 8 MP sensor oo mas'uul ka ah in ay rogrogto asalka sawirada aan ku qaadno qaabka sawirka.
Dhammaan kamaradaha ayaa isticmaala Sirdhaad dabiici ah inta lagu guda jiro farsamaynta, si loo hagaajiyo, ma aha oo kaliya tayada qabashada, laakiin sidoo kale in la tirtiro cilladaha yaryar.
Dhanka hore, Waxaan helnaa kamarad 16 MP ah, kamarad ay sidoo kale ku jiraan shaandhada quruxda si loo hagaajiyo sawir-qaadistayada, yaraynta khadadka muujinta, cilladaha iyo kuwa kale, ka dib, waxaan had iyo jeer ku qasbannahay inaan tirtirno.
Awoodda raaxada ugu badan
Haddii aad ku raaxaysato ciyaaraha ugu baahida badan ama inaad si joogto ah u duubto muuqaallo ama sawirro, adigoo isticmaalaya processor-ka MediaTek Helio G96 ma yeelan doono wax dhibaato ah oo waxqabadka ah.
Iyada oo la socota habayntan, oo dhaaftay 300.000 dhibcood ee bartilmaameedyada AnTuTu, waxaan helnay 8 GB ee xusuusta RAM nooca LPDDR4x iyo 128 GB ee nooca kaydinta gudaha UFS 2.1.
Labada xusuusta LPDDR4X iyo kaydinta UFS 2.1 waxay na siinayaan xawaaraha xogta iyo maaraynta codsiga waxay ka fogaan doontaa dib u dhacyo foolxun iyo kuwo kale oo aan ku jirno terminal aad u yar.
Battery dhowr maalmood
La baytari iyo kamarad waa muqadas. Dhammaan isticmaalayaasha doonaya inay cusboonaysiiyaan terminalkoodii hore mid cusub waa inay had iyo jeer xisaabta ku darsadaan labadan qaybood. Waxaan horey uga hadalnay qeybta kamarada ee kore.
Haddii aan ka hadalno baytariga, waa inaan ka hadalno 8.340 mAh oo ay bixiso Blackview BV8800. Batarigan weyn, kaas oo socon kara ilaa 30 maalmood oo heegan ah, waxaanu ku samayn karnaa safarro hawada furan anagoo haysano xasilooni maskaxeed oo dhammaystiran annagoo ka cabsanayn in lagu xannibo.
Blackview BV8800 waa 33W lacag degdeg ah oo ku habboon, taasoo noo ogolaanaysa inaan ku dallaco 1,5 saacadood oo kaliya. Haddii aan isticmaalno dallad hoose oo koronto ah, waqtiga dalladu wuu dheeraan doonaa.
Sidoo kale waxaa ka mid ah taageerada dib u dallacaadda, kaas oo noo ogolaanaya inaan ku dalacno qalabka kale ee batteriga qalabkan iyada oo loo marayo fiilada USB-C.
Naxdin iyo hoos u dhac u adkaysta
Sida aaladaha intooda badan ee soo saaraha, BV8800 ayaa na soo bandhigay shahaado ciidanShahaadada militariga ayaa lagu cusboonaysiiyay heerarka cusub, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon isticmaalayaasha jecel inay u safraan bannaanka.
Sidoo kale, mahadsanid kamarad aragga habeenkii, si fudud ayaan u hubin karnaa oo annagoo aan isticmaalin toosh, haddii hareerahayaga uu jiro xayawaan ama, la helo xubinta kooxda ee naga luntay.
90 Hz bandhig
Shaashada Blackview BV8800, waxay gaartaa 6,58 inch, oo leh FullHD + xallinta iyo saamiga shaashadda 85%. Laakiin, soo jiidashada ugu weyn waxaa laga helaa heerka nasinta, xadiga dib u cusbooneetiska oo gaadhay 90 Hz.
Waad ku mahadsan tahay heerkan cusub ee soo kicinta, dhammaan waxyaabaha ku jira, ciyaaraha iyo barnaamijyada daalacashada iyo boggaga internetka, waxay u eegi doontaa wax badan oo dareere ah marka loo eego bandhigyada caadiga ah ee 60Hz, maadaama 90 fiim ilbiriqsi kasta la soo bandhigi doono halkii 60.
La jaanqaadi kara Google Play
Gudaha Blackview BV8800, waxaan ka helnaa lakabka habeynta Doke OS 3.0, oo ku saleysan Android 11 waxayna la jaan qaadaysaa Play Store-ka, kaas oo noo ogolaanaya inaanu ku rakibno codsi kasta oo laga heli karo dukaanka rasmiga ah ee Google.
Doke OS 3.0 waa a dib u eegis weyn marka loo eego Doke OS 2.0. Waxa ku jira dhaqdhaqaaqyo dareen leh oo dareen leh, nakhshad si fudud loo isticmaali karo, abka abka smart preloading, notepad la cusboonaysiiyay oo taageera qoraal-qoritaan iyo cod qoraal ah...
Sida terminal wanaagsan oo u qalma milixdiisa, Blackview BV8800, waxaa ku jira labadaba sawirka faraha waxaa ku jira badhanka bilowga iyo nidaamka aqoonsi wajiga. Intaa waxaa dheer, waxaa sidoo kale ku jira badhan aan ku habeyn karno hawlaheeda 7 hawlood oo kala duwan.
Chip-ka NFC waa la waayayaa qalabkan. Thanks to chip this, waxaan ku bixin karnaa meherad kasta kaarkayaga deynta anagoo aan wadan boorsadayada iyo gaadiidka dadweynaha.
La dallacsiinta taas oo noo ogolaanaysa inaan helno Blackview BV8800 kaliya 225 euro VAT iyo dhoofinta ayaa lagu daray, waxay ku kooban tahay 500 ee ugu horreeya. Haddii aad jeceshahay wax kasta oo Terminalkan cusub ee Blackview uu ku siiyo, ha ka fikirin laba jeer.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Telefoon » Mobiles » Soo bandhigista: Blackview BV8800 kaliya 225 euro
Anker wuxuu ku soo bandhigay alaabtiisa cusub CES 2022
Dreame D9 Max, falanqaynta faakuum nadiifiyaha ugu dambeeyay ee waxqabadka sare ee robot